सम्बन्ध Archives - Page3of5- Nepali Virals
नायिका नेहाको हत्या प्रकरण: ‘ब्रा’ किन माथि सारियो ? कालो सल कहाँबाट आयो ?
२८ माघ २०७२, बिहीबार ११:४१	522
पोखरा नयाँगाउँका १९ वर्षीया नायिका योरुना पुन (नेहा) को हत्या प्रकरणले अर्कै मोड लिन थालेको छ । उनको गत १९ गते आफ्नै नजिकै हत्या गरिएको अबस्थामा शब् फेला परेको थियो । महेन्द्रपुलको स्माईल क्याफेमा कार्यरत योरुनाको हत्याको आरोप एक अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रहरीले वर्ष २१ का कृतन खड्गीलाई हत्याको आरोपमा प्रक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको थियो तर अहिले स्थानीयले भने नेहाको हत्या खड्गी एक्लैले गरेको नभई सामुहिक बलात्कार पछि हत्या भएको आरोप लगाएको छ । नेहाले लगाएको 'ब्रा' माथि सारिएको र उनले प्रयोग नै नगरेको कालो सल शब्संगै भेटिएपछि घटना थप रहस्यमय बन्न थालेको छ । खास के हो त यथार्थ पढ्नुहोस....
‘भ्यालेन्टाइन विक’ सुरु (पढ्नुहोस कुन दिन के गर्ने ?)
२५ माघ २०७२, सोमबार ०९:१८	11,678
प्रेम गर्नेहरुको महान पर्व भ्यालेन्टाइन डे मनाउनका लागि आजदेखि भ्यालेन्टाइन विक सुरु भएको छ । फेबु्अरी १४ तारिखका दिन मनाइने भ्यालेन्टाइन दिवस नेपालमा पनि विगतका बर्षदेखि साप्ताहिक रुपमा मनाइदै आइएको छ । राजधानी लगायतका शहरमा भ्यालेन्टाइनको रौनकता छाएको देख्न सकिन्छ । यो साता भरि आफ्नो प्रियसीलाई बिभिन्न उपहार दिएर भ्यालेन्टाइन विक मनाउने चलन छ । पढ्नुहोस् कुन दिन कसरी मनाउने....
महिलाका १० उत्तेजित अंग जहाँ छुने वित्तिकै ‘करेन्ट’ लाग्छ
१९ माघ २०७२, मंगलवार ०७:३८	1,317
पुरुष र महिलाको यौनांगको समागमले मात्र चरम सन्तुष्टी प्राप्त हुन सक्दैन । यसका लागि त दुवैमा विशेषः कला हुन जरुरी छ । पुरुषलाई त स्खलनपछि केही हदसम्म सन्तुष्टी प्राप्त होला तर महिलालाई सन्तुष्टी प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन । त्यसो त अवुझ जिवनसाथी परेको खण्डमा महिलाले जिवनभर यौन सन्तुष्टीबाट प्राप्त हुने स्वर्गीय आनन्दबाट वञ्चित हुन पर्छ । यसैकारण अनेक बाहानाबाजीमा कयौले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन । यौन सन्तुष्टि तब प्राप्त हुन्छ जब यौनसाथी उत्तेजित हुन्छ । महिला र पुरुष दुबैले दुबैलाई उत्तेजित बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै दुबैले पूर्ण चरम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अतस् पुरुषलाइ भन्दा महिलालाई उतेजनामा आउन बढी समय लाग्छ । यो कुरा पुरुषले बुझ्न नसकेको खण्डमा महिलाले कहिले पनि चरमसुख प्राप्त गर्न सक्दैन । स्नेहपूर्व भएर, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरेर महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन्। अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उत्तेजना उत्पन्न हुन्छ ।
जोसमा होस् गुमाएका १५ नेपाली हिरोइन
१३ माघ २०७२, बुधबार १५:०५	2,197
जवानीमा जोसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सके जीवन बन्छ तर सम्हालिएर काबुमा राख्न नसक्दा जीवनभर दाग लाग्ने मात्र होइन पल पल तड्पिरहन बाध्य हुन्छ । अझ सेलेब्रेटीहरुले त झन निकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सानो तिनो हेलचेक्र्याइँ पनि सेलिब्रेटीहरुको जीवनमा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसैले त भनिन्छ 'नाम कमाउन जति गाह्रो हुन्छ बद्नाम हुन् त्यो भन्दा कयौ गुणा सजिलो हुन्छ ।' प्रसंग हो नेपाली हिरोइनहरुको चर्चामा आउने स्टाइलको । चर्चामा आउनैका लागि अंग प्रदर्शन त सामान्य भैहाल्यो । यसका अलावा कोही पुरुषलाई बलात्कार गर्छिन त कोही शिशुलाई दुध चुसाउछिन् । टंङ् किस, बेड सिन, छाडा डाइलग त सामान्य झैँ लाग्छन उनीहरुलाई । हामीले यहाँ १५ नेपाली हिरोइनहरुको जानकारी पस्किने जमर्को गरेका छौ जो कुनै बेला ह्वात्तै तातेर अहिले स्वात्तै सेलाएका छन् । जो अचेल गुगलमा मात्र भेटिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
छोरा चाहियो कि छोरी ? सम्भोगअघि यी कुरा ख्याल गरौँ
१० माघ २०७२, आईतवार १६:२७	816
सेक्स केवल सन्तुष्टिका लागि मात्र होइन सन्तानोत्पादन अर्थात बंश विस्तारका लागि पनि हो । त्यसो त हाम्रो जस्तो पूर्वीय समाजमा छोरी को भन्दा छोराको महत्व अधिक मानिन्छ । यसै कारण पनि कतिपय दम्पत्ति छोराकै लागि मतिहत्ते गर्छन र दर्जनौ छोरी जन्मिदा पनि थाक्दैनन् । छोरा र छोरी जन्मिनुलाई बिज्ञानले आफ्नै कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । तर पनि धर्मशास्त्रहरुमा कुन कुन दिन सम्भोग गर्दा छोरा र छोरी जन्मिन्छ भन्ने केही भनाईहरु रहेका छन् । पढ्नुहोस् ज्योतिषशास्त्रका अनुसार छोरा पाउन र छोरी पाउन कुन कुन दिन सम्भोग गर्ने .....
७ माघ २०७२, बिहीबार १४:०२	2,111
२९ पुष २०७२, बुधबार १४:५३	3,282
थाहा पाउनै पर्ने पृथ्वीनारायणका १० दिब्य उपदेश
२७ पुष २०७२, सोमबार १०:२०	1,555
आज राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् पृथ्वी जयन्ती । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको स्मरणमा आज देश तथा विदेशमा बिबिध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइदै छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका लगायत बाइसी चौबिसी राज्य जितेर नेपाल एकीकरण गरेका थिए । नरभूपालशाह र रानी कौशल्यावतीको दाम्पत्यबाट गर्भ रहेको सात महिनामा नै जन्मेका पृथ्वीनारायणको लालनपालन, रेखदेख र शिक्षा दीक्षा भने जेठी महारानी चन्द्रप्रभादेवीबाट भएको हो । बीस वर्षे युवा अवस्थामा पृथ्वीनारायण गोरखा राज्यको गद्दीमा बसेका थिए । राजा भएलगत्तै नेपालको एकीकरणको महाअभियानमा होमिए पनि यसरी सतत् रूपमा युद्ध र संघर्ष गरेका उनी बाउन्न वर्षको उमेरमा जीर्णकायका भए । यसबेलासम्म पूर्वमा पल्लो किराँतसम्मका पहाडी भू-भागका साथै गण्डकी नदीदेखि कनकाइनदीसम्मका तराई क्षेत्र पनि एकीकरणको दायराभित्र आइसकेका थिए। कीर्तिपुरको युद्धमा उनी आफै पनि झण्डै मारिएका थिए । उनले जीवनको अन्तिम क्षणमा आफ्ना दरबारिया तथा जनताका नाममा भाइभारदारहरूलाई जम्मा गरी सुनाएका कुराहरु नै दिब्य उपदेश हुन् । यो उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मननयोग्य छ । दिब्य उपदेशमा उनका हरेक वाक्यको ठूलो महत्व छ तर यहाँ हामीले १० वटा यस्ता दिब्य उपदेश प्रस्तुत गरेका छौ जुन हरेक सच्चा रास्ट्रप्रेमी नेपालीले एक पटक पढ्नैपर्ने खालका छन् । पढ्नुहोस् उनका १० अति महत्वपूर्ण दिब्य उपदेश र उनका बारेका ८ रोचक कुरा
२६ पुष २०७२, आईतवार १०:५४	3,155
२४ पुष २०७२, शुक्रबार १३:५५	4,448